☆Ikhuselekile, Igumbi elipholileyo w/Wifi kufutshane ne-UN/iBhanki yehlabathi
Igumbi lakho lokulala e indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo sinombuki zindwendwe onguRobyn
Le yindawo yokuhlambela yangoku, ekhululekileyo kunye ne-COVID-19 ekhuselekileyo engeyo-ac ekwabelwana ngayo enegumbi elinye kwigumbi elineenkonzo zeendwendwe ezijonge ukuhlala ixesha elifutshane kunye nexesha elide. Ilungele abo bahlala kwi-quarantine lockdown. Ngelinen entsha, itawuli, impahla yokuhlamba impahla, isidlo sakusasa (ngesicelo) kunye nokugcinwa kwendlu yonke imihla, uqinisekisiwe ngenkonzo yeenkwenkwezi ezi-5. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, indawo yokuhlala ephangaleleyo, i-intanethi ye-WiFi ekhawulezayo, ukuthathwa kwesikhululo seenqwelomoya (ngesicelo kunye nokuhlawuliswa)
Le yindlu enkulu eneendawo ezininzi zabucala kunye nokwabelwana ngazo, ezinedekhi zelanga, iifestile ezinkulu eziqaqambileyo kunye nokufumana umoya omkhulu. Ifulethi lonke lihonjiswe kamnandi ngefanitshala ekhululekile, izityalo ezininzi eziluhlaza zangaphakathi kunye nemizobo emihle eludongeni.
Nantsi into oyifumanayo!
1. Igumbi lokulala elikhulu elinebhedi enkulu, enemiqamelo, iicushion, iqhiya, ilinen entsha kunye nentuthuzelo. Igumbi linekhabhathi enkulu, isitulo, izibane zokufunda, ii-hangers, ifeni yesilingi, kwaye lihonjiswe kamnandi ngemizobo eludongeni kunye nezityalo zangaphakathi ukwenza uzive usekhaya kwangoko!
2. Igumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo kunye nezinto eziluncedo ezifana neetawuli zokuhlambela ezitsha, iitawuli zesandla, ishampu, iconditioner, isepha, isicoci sesandla, kunye nesimanzisi. Ishawa kabini kunye namanzi ashushu!
3. Ipatio enkulu njengoko uphumela ngaphandle kwegumbi lakho ngocango lweglasi olubiyelweyo. Indawo igutyungelwe zizityalo zaseTropiki, kwaye ukuba unethamsanqa, uya kuvuka kwivumba leentyatyambo zerozi kunye nejasmine. Kukho i-hammock kunye nezitulo ukuze ufumane ikomityi yeti enencwadi. Ungasebenzisa kwakhona umatshini we-BBQ kwi-patio.
Isithuba ekwabelwana ngaso:
Nceda uqaphele, kukhuseleko lwazo zonke iindwendwe, indawo ekwabelwana ngayo iphantsi kokhuselo lweCCTV.
1. Igumbi lokuhlala elikhulu eliphangaleleyo elihonjiswe ngesitayile zizitulo, kunye neesofa. Zininzi iikona ezincinci zabucala apho unokuthi wenze into yakho nokuba kukho ezinye iindwendwe. Isithuba sixhotyiswe ngamatshaneli entambo kunye ne-intshi ye-LED ye-62" ye-intshi, ishelufu yencwadi enengqokelela yeencwadi ezincinci, ikona yomsebenzi ukuba kufuneka uzise umsebenzi ekhaya!
2. Indawo yezempilo kunye noLonwabo ixhotyiswe ngezixhobo zomthambo ezilula kunye neemethi zeyoga. Ungasebenzisa le ndawo yokucamngca, kunye neyoga, kunye nokusebenza okulula. (Phantsi kokulungiswa)
3. Ifriji, imicrowave, itoaster kunye nembiza yamanzi ashushu
4. Ikhitshi eliphangaleleyo elinazo zonke izinto ezisisiseko, iipleyiti, izinto zokunqunqa, kunye nezinto zokupheka. Kukho isitshisi segesi esiphindwe kabini kunye neepani zokupheka. Ungasebenzisa kwakhona indawo yokutyela. Kukho isihluzo samanzi samanzi amatsha!
5. Siphawule iindawo zenyikima, isicima-mlilo kunye nebhokisi yoncedo lokuqala!
## Nceda uqaphele - sibonelela ngesidlo sakusasa esongezelelweyo (asifumaneki ngezaphulelo):
1. I-Bangladeshi: I-Paratha (i-pancakes), i-Egg, i-Banana, kunye ne-Daal (i-lents), i-Tea / ikofu.
2. Okunempilo: I-Toast, iqanda, iBhanana, ubusi / iJam, iTea / ikofu
Sinomgcini-ndlu onyamekela zonke iimfuno zokugcina indlu. Kukho umphathi kunye nenkxaso eyongezelelweyo ukukunceda ngemisebenzi ethile, ukuhanjiswa kokutya kunye nesikhokelo! Indawo yokuhlala ineendawo ezininzi zokupaka, kunye nokhuseleko lweeyure ezingama-24/7.
Ibhedi enkulu eyi-1, 1 iisofa eziyi-, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1, \_u00A0Ibhedi yomntwana eyi-1, Ibhedi ekuthiwa yi-hammock eyi-1
4.64 ·Izimvo eziyi-22
4.64 · Izimvo eziyi-22
Indawo isembindini wedolophu yaseDhaka. Sisondele kakhulu kwiPalamente yeSizwe, iPasipoti kunye neofisi yokundwendwela. I-UNDP, iBhanki yeHlabathi, iBhanki yoPhuhliso lwase-Asia ikumgama wemizuzu eli-10, nto leyo ethetha ukuba yindawo ekhuseleke kakhulu, ngakumbi kwabo bangaphandle. Oku kukwalungele abo bahamba ngeenxa zonke eDhaka, kuba isembindini wayo. Izikhululo zeebhasi phakathi kwesixeko zikufuphi ukuba unqwenela ukuhamba ngaphandle kweDhaka. Ukuthenga kukho iPrince Bazaar, i-Aagora super market, igrosari entsha, kunye neJapan Garden City. Indawo izele ziindawo zokutyela zokwenyani, zihlala zivulwa kade kakhulu. Sikufuphi nje nesithili saseDhaka sobugcisa nenkcubeko yaseDhanmondi kunye neDyunivesithi yaseDhaka. Uninzi lweeNGO kunye nemibutho yophuhliso ibekwe ngokufanelekileyo kufutshane.
Andihlali kwipropathi kodwa ndiyafumaneka xa kufuneka